म बेपत्ता !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
म बेपत्ता !
माघ २५, २०७६ महेशविक्रम शाह
म एक दिन बेपत्ता भएँ । बेपत्ता हुनुको कुनै खास कारण छैन । कुनै समस्याले गाँजेर पनि बेपत्ता भएको होइन । रहरले पनि होइन । न कुनै त्यस्तो बाध्यता नै पर्‍यो, बेपत्ता हुनुपर्ने । मान्छे भएर जन्मे, हुर्कें । तर, मान्छे भएर बाँच्न सकस भयो मलाई । मान्छे भएर बाँच्न के गरिनँ र मैले ? सबथोक गरें । तर, अफसोस म मान्छेजस्तो मात्र देखिएँ । मान्छे नै बन्न सकिनँ ।
मान्छेहरूको भीडमा मेरो कुनै निश्चित बेग्लै आकृति देखिएन । मेरो अनुहारलाई मान्छेहरूले नै खोसिदिए । आफूलाई चिन्न पनि गाह्रो भयो । अनुहारविहीन मलाई रावणका जस्ता दस अनुहार भएका मान्छेको भीडले किच्न थाल्यो । ती कुरूप अनुहारको घेरामा ऐंठन भयो मलाई । बस् हराएको आफ्नो अनुहार खोज्न म बेपत्ता भएँ ।
प्रायः मान्छेहरू बेपत्ता भएको मान्छेका बारेमा कुरा गर्दैनन् । कुरा गर्नेहरू पनि वास्तविक कुरा गर्दैनन् । काल्पनिक कुरा गर्छन् । आ–आफ्ना दृष्टिकोण, विचार, कल्पना र अनुमानका भरमा बेपत्ता हुने व्यक्तिको अवस्थाबारे तर्क, कुतर्क प्रस्तुत गर्छन् । सहानुभूति व्यक्त गर्छन् । ‘....बिचरा जे भए नि ऊ राम्रै मान्छे थियो । बेपत्तै हुनुपर्ने त होइन । के पीर परेछ ? अरूले नै बेपत्ता गरिदिएका हुन् कि... !’ बेपत्ता हुनेप्रति मान्छेहरूले खासै वास्ता गरेको पनि देखिँदैन । मान्छेहरू बेपत्ता भएको मान्छेप्रति भन्दा उसले छोडेर गएको परिवारजनप्रति बढी सद्भावपूर्ण हुन्छन् । तिनीहरूको पीडाप्रति संवेदनशील बन्छन् । र, अचम्मको कुरा कहिलेकाहीँ अपवादस्वरूप आम मान्छेहरूका हृदयमा बेपत्ता हुनेप्रति पनि करुणाको भाव जाग्छ । ‘...बिचरा कहाँ होला ? के गरिरहेको होला ? कति दुःख–हन्डर खायो होला ?’ आदि । तर, कसलाई के थाहा ? बेपत्ता हुने मान्छेको पनि आफ्नै मनमौजी दुनियाँ हुन्छ । राजा पनि आफैं... रंक पनि आफैं ।
मलाई बेपत्ता हुन मन लागेर म बेपत्ता भएँ । म बेपत्ता भएर कसैलाई पीर लाग्यो होला ! मेरो उपस्थितिप्रति निरपेक्ष व्यक्तिहरूलाई पनि मेरो अनुपस्थिति प्रीतकर नलाग्न सक्छ । मैले दुःख पाउने भएँ भनेर दुःख लाग्न सक्छ । कोही खुसी पनि भए होलान् । म बेपत्ता भएर को दुःखी भयो ? को खुसी भयो ? यो मेरो सरोकारको विषय होइन । मेरो सरोकार मसँग मात्र छ । यी परिवार र समाजका साङ्लाहरूलाई छिनालेर मैले पाएको यो स्वतन्त्रता मेरा लागि आह्लादकारी छ । यहाँ कसैका चिरपरिचित अनुहारहरू छैनन् । मैले चिन्ने मेरो आफ्नो अनुहार मात्र छ । आफैँलाई बेपत्ता बनाएर मैले पाएको मेरो नयाँ परिचय मेरा लागि रोमाञ्चक छ । कसैले सोच्नसम्म सक्दैन मेरो बेपत्तापन मलाई कति प्यारो छ !
अरूका लागि म बाँचिदिनुपर्ने । खाइदिनुपर्ने, लगाइदिनुपर्ने । पढिदिनुपर्ने । अरू खुसी भए हाँसिदिनुपर्ने । अरू दुःखी भए रोइदिनुपर्ने । सबैले सोचेजस्तो, खोजेजस्तो असल मान्छे बन्नुपर्ने । छोराछोरीका लागि सम्पत्ति जोडिदिनुपर्ने । आमाबाबुका लागि ठूलो मान्छे बनेर नाम कमाउनुपर्ने । यी सब कुरा बाहियात लाग्यो मलाई । म एक स्वतन्त्र ब्यक्ति होइन । बँधुवा हुँ । जति गर्नुपर्ने काम छन् अरूलाई रिझाउन, चित्त बुझाउन गर्नुपर्ने ! आफ्नो एक मुठी सासमाथि पनि अरूको नियन्त्रण !
अनि त मलाई आफैंले आफैंलाई बेपत्ता गरिदिन मन लाग्यो । आफैंबाट आफैंलाई हराइदिन मन लाग्यो । बेपत्ता भएर त्यो दुनियाँमा बाँच्न मन लाग्यो, जहाँ मेरो अस्तित्व हुनु र नहुनुमा कोही कसैलाई पनि फरक नपरोस् । जहाँ मेरो अस्तित्व निरपेक्ष बनोस् । मैले हाँस्नु र डाँको छोडेर रुनुमा कसैलाई कुनै मतलव नहोस् । म बौलाहाझैं अट्टहास गर्दै हाँसूँ वा बच्चाजस्तै भुइँमा लडीबुडी गर्दै कोकोहोलो गरूँ, मेरो अट्टहास र रोदनमा कसैको चासो र जिज्ञासा नहोस् । हो, म मेरो यही भावनाले वशीभूत भएर बेपत्ता भएँ ।
घर छोडेर हिँडेपछि मेरो कुनै तोकिएको गन्तव्य थिएन । मेरा अगाडि सिंगो धर्ती थियो । र, माथि खुला आकाश । मलाई कसैको आदेशमा चल्नु थिएन । न त कसैको आग्रहमा रोकिनु । न मलाई कसैले रोक्ला भन्ने पीर थियो न त कसैको आग्रहले मेरा पाइलाहरू अन्तै मोडिएलान् भन्ने सकस नै थियो । ओहो यो कस्तो अनुभूति थियो ? मानौं म भर्खर सांसारिक वस्त्र त्यागेर गेरुवस्त्रमा लपेटिएको कमण्डलुधारी जोगी बनेको थिएँ । सबै आडम्बरहरूका वस्त्रबाट मुक्त एक फकिर !
मन लागुन्जेल हिँडें म । हिँडिरहें । जीवनमा पहिलोपटक निस्फिक्री भएर कतै गइरहेको थिएँ म । भन्नेहरू भन्छन्, निरुद्देश्य मान्छे कहाँ जान सक्छ ? जो मान्छेले कहिल्यै निरुद्देश्य हिँड्ने कोसिस नै गरेको छैन, उसले कसरी जान्न सक्छ निरुद्देश्य हिँड्नु आफैंमा एक महान् उद्देश्य हो ! निरुद्देश्य कुनै सीमितता हुँदैन । त्यहाँ असंख्य विकल्प हुन्छन् । ती स्वतन्त्र विकल्पको खोजीमा नै मैले आफैं बेपत्ता हुनुको शिल्प भेट्टाएँ ।
म कहाँ जान लागेको हुँ, मलाई नै थाहा थिएन । बेपत्ता हुँदा कुनै तयारी गरेको थिइनँ । जस्तो थिएँ, त्यस्तै हिँडेको थिएँ । मेरो शरीरमा एक जोर वस्त्र थियो । खुट्टामा जुत्ता । नांगो शरीरलाई नांगिन नदिने वस्त्रलाई पनि च्यातेर फालूँजस्तो लाग्यो । जुत्तालाई समेत पर उछिट्याउन मन लाग्यो । जुन समाजलाई त्यागेर म हिँडेको थिएँ, त्यो समाजको अवशेषका रूपमा यो वस्त्र मेरो शरीरमा झुन्डिरहेको थियो । एक मनले त लुगालाई परित्याग गरेर नांगै दौडूँजस्तो लाग्यो । तर, म शिवरात्रिमा पशुपतिमा भेटिने नागाबाबाझैं निर्लज्ज भइसकेको थिइनँ । मान्छेका केही अवगुण ममा अझै विद्यमान थिए । लाज भन्ने वस्तुले मलाई निरुपाय बनाइरहेको थियो । तर, म मान्छेका यी दुर्गुणहरूबाट समेत भाग्न चाहन्थें । बेपत्ता हुन चाहन्थें ।
बाटोछेउका रूखका हाँगाहाँगाहरूमा चराहरू चिरबिरचिरबिर गरिरहेका थिए । म पनि चराजस्तै भइदिए कति जाती हुन्थ्यो ? चराका शरीरमा प्वाँखहरू छन् । मेरो शरीरमा प्वाँखहरू किन छैनन् ? मेरो शरीरमा पनि प्वाँखहरू पलाएको भए म कति स्वतन्त्र हुन्थें ! वस्त्रका बोक्राहरूले कमसेकम मेरो देहयष्टिलाई विरूप र प्रदूषित बनाउने त थिएनन् ।
थकाइ लाग्यो, चौरमा मन लागुन्जेल पल्टिएँ । कतै जान अबेर हुनेवाला थिएन । कसैले कति चौरमा सुतेको हो भनेर भन्नेवाला पनि थिएन । नजिकै नदी सुसाइरहेको थियो । नदीको कञ्चन पानीमा गोडा डुबाएर नदीका छालमा मुख जोत्दै धीत मरुन्जेल पानी खाएँ । नदीलाई हेरें । नदीको वेग देखेर नदी बन्न मन लाग्यो । अर्को मनले भन्यो ‘नदीले मेरा आकांक्षाका सीमाहरू भेट्न सक्दैन । नदी त एकतर्फी बग्छ । तर म चौतर्फी फैलिन चाहन्छु । म नदीमा अटाउन सक्दिनँ ।’ नदीमा चोबलेका गोडाहरूबाट पानी तर्काउँदै म फेरि बाटैबाटो सुसेल्दै हिँड्न थालें ।
पहाड आयो । पहाडतिर हेर्दै मैले सोचेँ— यसलाई पनि त बेपत्ता हुन मनलाग्दो हो, कति यौटै ठाउँमा कुँजिएर बसोस् ! पहाडलाई छेको बनाएर कहिले घाम बेपत्ता हुन्छ । पहाडलाई ढाल बनाएर कहिले मेघ बेपत्ता हुन्छ । पहाडलाई फेरो लाउँदै बादलका स्वरूपहरू परिवर्तन हुन्छन् । पहाडलाई साक्षी राख्दै हुस्सु र कुहिरोका फूलहरू पत्र–पत्रमा बिखरिँदै अकासिन्छन् । तर, पहाड फलामका सिक्रीले जकडिएको ज्यानमाराजस्तो अविचल, अस्थिर मुद्रामा जहाँको तहीँ ठिंग उभिएको उभियै ! उफ् ! मलाई पहाड हुन मन लागेन । यो धर्तीलाई पहाडजस्तो बोझ बन्न मन लागेन । बरु म बर्सिदिन्छु मेघ बनेर बादललाई रित्याउँदै । र, माटोभित्र हराउँछु । हुस्सुजस्तो जमिनबाट उठ्दै पहाडभन्दा माथिमाथि आकाशमा बिलाउँछु । म मान्छे कणकणमा टुक्रिन चाहन्छु । म मान्छे कणकणमा विभक्त भएर बेपत्ता हुन चाहन्छु ।
मलाई पहाड चढ्न मन लागेन । तल झरें । म फेरि हिँड्न थालें । स–साना थुम्काहरू देखिए । समथर जमिन आयो । जंगल आयो । जंगल देखेर मोहित भएँ म । किनकिन मलाई जंगल रहस्यमय लाग्छ !
जंगल आफैं हराउँदैन तर जंगलमा सबै चीज हराउँछ । जंगल आफै शून्य होइन तर जंगलभित्र महान् शून्यता छ । म जंगलभित्र पसें । मान्छेहरूको कोलाहलबाट पृथक् ! समुदायका मूल्य मान्यताहरूको बोझबाट मुक्त ! कसैका जिम्मेवारी र कसैका दायित्वबाट उन्मुक्त ! केही छजस्तो पनि, केही छैनजस्तो पनि । जंगलको गहिराइभित्र छिर्दै गएँ । मन एकतमासको भयो । जुन शून्यताको खोजीमा हराएको थिएँ म, जंगल महाशून्य लाग्यो । यो निःशब्दताले मेरो मन बेचैन भयो । मलाई जंगल आदिम मानव समाजजस्तो लाग्यो । रूखहरू मानौं ठिंग ऊभिएका आदिमानव । थरीथरीका रूखहरू, थरीथरीका मान्छेहरू । बोलिरहेका छैनन् तर साउती गरिरहेका छन् । मलाई जंगली जनावरसँग नभई रूखहरूसँग डर लाग्न थाल्यो । जुन मान्छेहरूबाट भागेर म जंगल पसेको थिएँ, यहाँ मान्छेहरू रूख बनेर मलाई वरिपरिबाट घेर्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए । बेतोडले अघि आएको दिशातर्फ कुदें म । म सँगसँगै रूखहरू पनि कुद्न थाले । जंगलबाट भागेर कुन बेला म बाटोमा निस्केँ र जमिनमा पछारिएँ मलाई केही याद छैन ।
म उठें । फेरि हिँड्न थालें । यी नदीनाला, पहाड र जंगलबाट मलाई मोहभंग भएको थियो । बेपत्ता हुनुको यो अर्थ होइन कि म मर्न चाहन्थें । म मात्र बेपत्ता हुन चाहन्थें । उन्मुक्ति चाहन्थें । पिंजराबाट सुगा फुर्र उडेजस्तो । जलहारीको जालबाट माछो फुत्त फुत्केजस्तो । तर, प्राकृतिक दृश्यले मान्छेको बेपत्तापनका भावहरूलाई अल्झाउँदो रहेछ । प्रकृतिको सान्निध्यमा आफू मान्छे हुनुको परिचय झन् प्रखर बन्दोरहेछ । जुन परिचयबाट म वाक्कदिक्क भएर भागें, प्राकृतिक दृश्यहरूमा मेरो त्यो परिचय घामका परावर्तित किरणहरूले कोरेको तस्बिरझैं स्पष्ट र पारदर्शी हुँदोरहेछ । अन्ततः प्रकृतिबाट भागेँ म । मलाई बोध भयो, मान्छेलाई बेपत्ता हुन मान्छेहरूकै भीडमा सहज हुने रहेछ । मान्छेबाट भागेर बेपत्ता हुन नसकिने रहेछ । म फेरि मान्छेहरूकै बस्तीतिर सोझिएँ ।
हिँड्दाहिँड्दा थकाइले चुर भएँ । कसैको करकापले हिँडेको थिइनँ । आफ्नै इच्छाले बाटाहरूको लम्बाइ नापेको थिएँ । दिमागमा यो सोच आउनु नै गज्जबको अनुभूति थियो । आफ्ना गोडाहरूतिर हेर्दै मज्जाले हाँसें म । धित मरुञ्जेल हिँड्न पाएकोमा मेरा गोडाहरू पनि दंग थिए ।
मलाई गाडी चढ्न मन लाग्यो । परबाट एउटा बस हुत्तिँदै यतैतिर आउँदै थियो ।
‘कहाँ जाने हो ?’ सोध्यो कन्डक्टरले ।
‘यो कहाँसम्म जाने हो ?’ सोधेँ मैले ।
‘म पनि त्यैं जाने हो ।’ मेरो जवाफ सुनेर किच्च हाँस्यो ऊ । मनमनै सोच्यो होला, ‘सधैं यस्तै सज्जनहरूले बसको यात्रा गरिदिऊन् ।’
मैले बसको खुला ढोकाको डन्डी समातें । हावाको तीव्र झोंकाले मेरो कपाल हल्लाइरहेको थियो । मेरो टाउकोमा उम्रेका हजारौं लामा रौंहरू मन्दिरका ध्वजापताकाहरूझैं आकाशतर्फ मुख फर्काएर फरफराइरहेका थिए । सोचें, ‘ए कपाल तैँले पनि आज खुला हावासँगै बत्तिन पाइस् ।’ शक्ति हुँदो हो त यी कपालका रौंहरू पनि शिरबाट आफ्ना जरा उखेल्दै मबाट बेपत्ता हुँदा हुन् ।
‘भित्र सिटमा बस्नुस् न । खस्नुहोला,’ कन्डक्टर बोल्यो ।
म फिस्स हाँसें । म बसबाट खसे पनि नखसे पनि कसैलाई कुनै असर पर्ने थिएन । न त म खसें भने केही गुमाउनेवाला थिएँ । बस् खसेको भए सायद स्वतन्त्रताको यात्रा यहीं टुंगिन्थ्यो । यो अपरिचित बसको अपरिचित मान्छेलाई पनि मेरो स्वतन्त्रता पचिरहेको छैन । मेरो स्वतन्त्रतामा ऊ आफ्नो जीवनको असुरक्षा बोध गरिरहेको छ । अरूको स्वतन्त्रतामाथि घात गरेर मात्र मान्छेले आफूलाई सुरक्षित ठान्छ ।
बोर्डरको बजारमा बस रोकियो । म बसबाट ओर्लें । सबै जना लाखापाखा लागे । म भने ठिंग उभिएर टोलाइरहें । मलाई कुनै निश्चित तोकिएको ठाउँमा जानु थिएन । यता जाऊँ, उता नजाऊँ भनेर अवरोध पु‌र्‍याउने दुष्ट मान्छेहरू पनि कोही थिएनन् । जहाँ मन लाग्यो त्यहीं जान सक्थें । केही सोचेपछि म सडकको किनारैकिनार दक्षिणतर्फ हान्निएँ । म होटलमा पुगें । होटलको मालिक आफ्ना मैला हातहरूले नोट गन्दै थियो ।
‘मलाई काम चाहियो,’ मैले भनें ।
‘के काम गर्छौ ?’ उसले सोध्यो ।
‘जे काम पनि गर्छु ।’
‘भाँडा माझ्छौ ?’
‘तिम्रो नाम के हो ?’ साहुले सोध्यो ।
‘जुन नामले बोलाए नि हुन्छ । मेरो कुनै नाम छैन ।’
‘मान्छेको नाम नहुने पनि हुन्छ ?’ साहु चकित भयो ।
‘नाम भएर पनि के हुन्छ र साहुजी ? आखिर तपाईंलाई काम चाहिएको हो । कामभन्दा नाम महत्त्वपूर्ण होइन । काम भन्नुस् ।’ मेरो कुराबाट साहु प्रभावित देखियो ।
‘जुन दिन जे भनेर बोलाउन मन लाग्छ त्यै भन्छु । हुन्छ ?’ साहु दंग परिरहेको थियो ।
मैले शिर हल्लाएर भनें, ‘हुन्छ ।’
‘अनि घर कता पर्छ नि ?’ साहु फेरि आफ्नो पारामा फर्क्यो ।
‘तपाईंलाई म कहाँको जस्तो लाग्छ ?’ मैले भने ।
‘यसो जीउडाल, बोलीवचन हेर्दा त पूर्वतिरको लाग्छ त !’ साहुले मेरो शिरदेखि पैतालासम्म नापतौल गर्‍यो ।
‘हो हो त्यतैतिर हो ।’ म बेपत्ता भएको मान्छेको कुनै निश्चित ठेगाना हुने कुरा थिएन । मेरो जवाफले साहुलाई मक्ख बनायो ।
‘अनि जात के होला ?’ साहु फेरि बोल्यो ।
‘तपाईंलाई के लाग्छ म कुन जातको परें ?’
‘खोइ ठम्याउनै मुस्किल भो त ! चुच्चो नाक, चिम्सा आँखा, पुक्क परेका गाला, खैरो कपाल । छुट्याउनै गाह्रो भो त !’
‘तपाईं जे सोच्नुस् मेरो जात त्यही हो,’ मैले भनें ।
साहु खितखित हाँस्न थाल्यो ।
‘के कुरा गरेको साहुजी ? यी बाबु त नेवारजस्ता लाग्छन् । काठमाडौंबाट आएका हुन् कि !’ पसलभित्र बसेको एक ग्राहकले आफ्नो अनुमान पेस गर्‍यो ।
‘अब काठमाडौंबाट यो बोर्डरमा कोही मान्छे काम खोज्न आउला त ? कस्तो नचाइने कुरा गरेको नि !’ साहु बोल्यो ।
‘तपाईंहरू अन्यथा नलिनुहोला । मेरो कुनै एक जात छैन । जातै चाहियो भने पनि म सबै जातको मान्छे हुँ,’ मैले भनें ।
साहु छक्क परेर मलाई हेर्दै थियो ।
म पनि यस कुराले रोमाञ्चित थिएँ कि अब मेरो कुनै जात थिएन । अथवा भनौं मेरा सबै जात थिए । जसले जे सोच्यो मेरो त्यही जात । मेरो कुनै निश्चित ठेगाना पनि थिएन । जसले जहाँको सोचोस् मलाई के को टण्टा ! मेरो विचारमा त म जुन भूमिमा टेकिरहेको हुन्थें, मेरो खास ठेगाना त्यही थियो ।
होटल साहुले मलाई रातको खाना दियो र त्यसबापत जुठा भाँडाहरूको रास पनि दियो । मध्यरातसम्म आकाशका ताराहरू हेर्दै जुठा भाँडाहरू मस्काइरहें । यो दुनियाँमा यसरी अरूले छोडेका जुठा भाँडाहरू माझ्ने म एक्लो ब्यक्ति होइन भन्ने लाग्यो । यो मेरो रोजेको काम थियो । स्वतन्त्र मनले जुठा भाँडा माझ्दा आफ्नो जुत्तामा पालिस लगाएजस्तो आनन्द आउँदो रहेछ । मैले धोएका भाँडाहरूको टलक जूनको टहटहभन्दा कम थिएन । जूनको उज्यालो जति तिख्खर भए पनि ताराहरू चम्किन छोड्दैनन् ।
मिर्मिरेमै उठें । बाहिर सडकमा भुस्याहा कुकुरहरू स्ट्रिट फाइट गरिरहेका थिए । यी कुकुरहरू भुस्याहा कसरी भए ? कुनै घरको पाल्तु नभएकाले भुस्याहा भए । छाडा भए । मैले पनि त घर र समाजको पाल्तु बन्न अस्वीकार गरें । सायद म पनि भुस्याहा भएँ । यो संसारमा आफ्नो मनले जिन्दगी जिउन चाहने प्राणीहरू भुस्याहा नै ठहरिन्छन् सायद !
मैले साहुको होटेल छोडें । म मान्छे भुस्याहा, कुकुर भुस्याहाको वर्गसँग एकाकार भएँ । आफ्नै वर्गको भुस्याहा मान्छेको साथ पाएपछि भुस्याहा कुकुरहरू पनि मान्छे बन्ने भ्रम पाल्दा रहेछन् । भुस्याहा कुकुरहरू ङ्यार–ङुर गरिरहेका थिए । मलाई देखेपछि सुरुमा त्रसित हुँदै पुच्छर खुट्टामुनि लुकाएर कुदे । मैले ओठ गोलो पारेर सिट्टी बजाएँ । हातले इसारा गर्दै भने, ‘यहाँ मसँग आऊ । म दुईखुट्टे भए पनि तिमीहरू चारखुट्टेसँग मिल्न सक्ने भुस्याहा हुँ ।’ कुकुरहरूले टाउको ठाडो पारेर मेरो अनुहारतिर हेर्दै परख गरे, ‘के यो साँच्चै भुस्याहा नै हो त !’
तिनीहरूले मेरो भुस्याहापनप्रति विश्वास गरे । आफ्नो पुच्छर हल्लाउँदै मेरा खुट्टाहरूमा लुटुपुटु गर्न थाले । मैले एकएक गरी तिनीहरूलाई अँगालोमा बेरें । तिनीहरूले मेरो अनुहारमा मायालु चुम्बनको वर्षा गरे । जीवनमा एकैपटक यति धेरै चुम्बन कसैले गरेको थिएन । बेपत्ता हुनुको यो एक मौलिक अनुभव थियो । कुकुरहरूसँग बात मार्दै म सडकमा हिँड्न थालें । बिस्तारै कुकुरहरू पनि छुट्दै गए । जिन्दगीमा सधैं एकनासले कसैले कसैलाई साथ दिंदो रहेनछ ।
म हिँड्दै गएँ । सीमामा पुगेपछि पुलिसले मलाई रोक्यो ।
‘कहाँ जान लागेको हो ?’
‘बेपत्ता हुन ।’
‘को बेपत्ता ? किन ? कसरी ?’
‘म आफैं बेपत्ता हुने ।’
‘तिम्रो पता के हो ?’
‘थाहा छैन ।’
‘आफ्नो पता पनि थाहा छैन ?’
‘छैन । केही थाहा छैन ।’
‘पता छैन के को बेपत्ता ?,’ पुलिस हाँस्न थाल्यो ।
पुलिसले गज्जब कुरा गरेको थियो । मेरो पता छैन । के को बेपत्ता ? पता हुने मान्छे पो बेपत्ता हुन्छ त !!
‘आईडी छ ?’
‘त्यो पनि छैन ।’
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र ?’
‘अहँ छैन ।’
‘पालिकाको सिफारिस ?’
‘अहँ त्यो नि छैन ।’
‘अरू कागजात ? नाम, थर, वतन खुलेको ?’
‘केही पनि छैन ।’
‘पहिला पता लिएर आउनू । त्यसपछि बेपत्ता हुनू । पता नभएर नि मान्छे कहीं बेपत्ता हुन्छ ?’
पुलिसले मलाई बोर्डर पार गर्न दिएन ।
यो देशले मेरो व्यथा किन बुझ्दैन ? मेरो पता भएको भए किन मलाई बेपत्ता हुनुपर्थ्यो ?
प्रकाशित : माघ २५, २०७६ १३:२८
माघ २५, २०७६ बिना थिङ
मिर्मिरेमा मुख धुने पानीसँगै हुन्छु म आगो फुक्न खोज्छौ नि, खरानीसँगै हुन्छु म, तिम्रा लागि मेरो याद, लेखेर पो के साध्यतिमीले हेर्ने दुई आँखाको नानीसँगै हुन्छु म
‘नयाँ साल २०५६ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।’ मैले ओछ्यानमुनिबाट पोस्टकार्ड झिकेर हेरें । पोस्टकार्डको पछाडि मुक्तकसहितको शुभकामना थियो । देब्रेपटि लेखिएको थियो— प्रेषक दीपेश थापा । दाहिनेपट्टि प्रापक– चिनीमाया लामा ।
घाम ओइलाएर गयो । पुसको धङधङी आधाउधी बाँकी थियो ।
‘चिनीमाया एक अँगालो ढोड लेरा त ।’ आमाको आवाज आएपछि कार्ड सिरानीमुनि घुसारें । बारीमा गएँ । आफ्नो हरियो अस्तित्व गुमाउदै जानुपरेको पीडामा झार त्यसैत्यसै लत्रिएको देखिन्थ्यो । त्यसमाथि हिउँदको धूलोले साम्राज्य जमाएको थियो । छपक्क । मैले गन्धे झारको मसिनो फूल चिमोटेँ । फूलबाट निस्केको हरक मेरो श्वासनली हुँदै फोक्सोमा पुग्यो । लामो श्वास छोडेँ । फेरि तानेँ । फेरि छोडेँ । मलाई मज्जा लाग्यो । यसरी गन्धे झारको हरक सुँघ्न मभन्दा दीपेश खप्पिस थियो ।
‘बारीको पाटापाटा दिदीसँगै मेलामा उभिँदादेखि यसको हरक सुँघेको हुँ । म यो झार सुँघेरै हुर्कें । सबैबाट उपेक्षित यो झार र म उस्तै हुँ ।’ दिपेश भन्ने गर्थ्यो । त्यसयता गन्धे झार मेरो पनि आदत बनेको थियो । तर ऊ गायब भएको महिनौं भइसकेको थियो ।
मैले एक अँगालो ढोड बटुलेँ । टाउकोमा राखेँ । सरासर गोठतिर गएँ ।
गोठको मध्यभागमा चुल्हो थियो । बाले तीनवटा ठूला ढुंगा बटुलेर चुल्हो बनाउनुभएको थियो । चुल्होको दुई प्रयोजन थियो । एउटा बंगुरलाई चारो पकाउन । अर्को जाँड बिग्रियो भने रक्सी पार्न । त्यस बिहान आमाले ठूलो फोसीभरि कर्कलोको फाँडो पकाउनुभयो । र, मकैको जाँड बसाल्नुभयो । मेरो ड्युटी भनेको चुल्होमा आगो लगाउनु । रक्सीको भान तात्दै गयो । ढोड ह्वार्र सल्कने । निभ्ने । दिमागमा पनि त्यस्तै ह्वार्र केही बल्थ्यो । फेरि निभ्थ्यो ।
‘दीपेश कहाँ गयो होला ?’
‘के ऊ आफ्नो एक्लो आमालाई छोडेर जान सक्छ ?’
मेरो दिमागमा प्रश्नहरूको रिले चलिरह्यो ।
म सधैं ऊ आउने बाटो कुर्थें । बिहानको कक्षा चल्दासँगै स्कुल जान्थ्यौं । झिसमिसेमा लामो पाइला चाल्दै ऊ आउँथ्यो । लामा हातगोडा थियो उसको । दुब्लो । धतुरो फूलको जस्तो थियो, शरीरको रङ । सुलुत्त परेको नाक । कैला लाम्चा आँखा । कफी रङको नरम कपाल । ऊ हाँस्दा देब्रे गालामा खोपिल्टा पर्थ्यो । फुर्केचौरमा बस्थ्यो । आमा र दिदीसँग । उसको बाबु इन्डिया पलायन भएका थिए ।
‘मैले सम्झेदेखि बुबालाई देखिनँ । बुबाको अनुहार कस्तो छ ? उहाँ किन फर्कनुभएन ? केही थाहा छैन । आमालाई सोध्छु । मौन बस्नुहुन्छ । किन हो गाउँलेले पनि अनौठोसँग मलाई हेरेजस्तो लाग्छ ।’ गहिरो सास लिँदै दीपेश भन्थ्यो । उसको आँखामा गुनासो हुन्थ्यो । आमाप्रति । बुबाप्रति । गाउँलेप्रति ।
ढुंगाको एकपाखे अग्लो घर थियो दीपेशको । टायलको छाना भएको । घरको एउटा कुनामा बाख्रा बाँधिन्थ्यो । कुखुरा छोपिन्थ्यो । अर्को कुनामा ओछ्यान हुन्थ्यो । घरको पश्चिम कुनामा ढुंगाको चुल्हो थियो । उसकी दिदी सबेरै चुल्होमा तावा बसाल्थी । गहुँको सुक्खा रोटी पोल्थी । ह्यामानको ढुंगाको सिलौटामा नुन खुसार्नी पिन्थी । सुतीको नरम कपडामा रोटी पोको पारेर राख्थी । अनि मेलामा जान्थी । कहिले मकै गोड्न । कहिले कोदो टिप्न । उसकी आमा पनि बिहानैदेखि बनीमा गएकी हुन्थिन् । दीपेश बाख्रालाई स्याउला झुन्ड्याउँथ्यो । चल्लालाई कनिका छर्थ्यो । घर बढार्थ्यो । ओछ्यान मिलाउँथ्यो । दिदीले पकाएर राखेको रोटी नुन खुसार्नीमा चोपेर खान्थ्यो । अनि स्कुल हिँड्थ्यो । ऊ मेरो सहपाठी थियो । स्कुलमा ऊ अलिक झोँक्की छात्राको रूपमा परिचित थियो । उसलाई धेरै कुरासँग चित्त बुझाइ थिएन । रक्सी पिएर कक्षामा आउने मास्टरसँग सबैभन्दा बढी क्रुद्ध हुन्थ्यो ।
–हेडसरको कमजोरी हो । यस्तो शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर किन केही गर्दैनन् ?
–हाम्रो स्कुल किन साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गर्दैन ?
–सन्तु दाइलाई निकालेर लेखापाल सरको गाउँलेलाई किन पियनमा राखेका ?
–अरे, मेरो नाम छ, दीपेश थापा । तर तिनीहरू किन मलाई कैले भन्छन् ?
–हाम्रो कुकुरलाई छिमेकी किन लात्ताले भकुर्छ ?
–मेरो बुबा आए नि नआए नि गाउँलेलाई के मतलब ?
दीपेशभित्र असन्तुष्टिका बक्ररेखाहरू थियो ।
‘चिनीमाया, मलाई यो संसारमा कसैप्रति सम्मान जाग्दैन । विश्वास पनि लाग्दैन । कोही मलाई बुझ्दैनन् । मलाई बुझ्ने तैँ एउटा छस् ।’
मलाई भेट्दा प्रायः ऊ गुनासो गर्थ्यो । रिस पोख्थ्यो । माया जताउँथ्यो ।
शैक्षिक सत्र २०५६ । कक्षा ९ मा उक्लिएको वर्ष । त्यस दिन हामी कक्षामा ज्यामितिको साध्यमा अलमलिएका थियौं । रिजाल सर हाम्रो दिमाग भुट्दै थिए ।
‘सर एक छिन हामी विद्यार्थीहरूसँग बैठक गर्छौं ।’
कक्षाको ढोकामा छ जना केटा उभिएका थिए । तिनीहरूको ओठमाथिको धारिलो जुँगा प्रस्ट देखिन्थ्यो । तीमध्ये होचो केटाले अनुमति माग्यो । रिजाल सर अकमकिए । केटाहरू ह्वार्रै कक्षामा पसे ।
‘विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अभिवादन । म साम्देन मोक्तान । क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको जिल्ला अध्यक्ष । हाम्रो संगठन विस्तारको क्रममा छ । तपाईंहरू पनि हाम्रो संगठनमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ । संगठनले स्कुलका विकृति विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउँछ । विद्यार्थीको जायज माग पूरा गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दबाब दिन्छ ।’
श्यामश्वेत वर्णको साम्देनले आफ्नो पुटुक्कको हात निकै जोडले हल्लायो । उसको थेप्चो नाकको पोरा फुल्यो । जोसिएर भाषण गर्दा ऊ निदाएको जस्तो देखियो । त्यस दिन हाम्रो कक्षाबाट चार जना साथीले विद्यार्थी संगठनको सदस्यता लिए । दीपेश थापा, फूल लामा, सावित्री भण्डारी र सुनबहादुर घिसिङ । ‘अब स्कुल सिस्टममा आउँछ । सधैं यिनीहरूले मनपरी चल्दैन ।’ घर फर्किंदा दीपेशले आफ्नो सिन्काजस्तो हात हावामा हल्लायो ।
‘यिनीहरू त माओवादी होइनन् र ?’ मैले सोधें सानो स्वरमा । म दीपेशको सास भेटिने गरी हिँडिरहेकी थिएँ ।
‘होइन । अघि सुनिनस् ? यिनीहरू क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका हुन् ।’ दीपेश विश्वस्त थियो ।
त्यसपछि उसको व्यस्तता निकै बढेर गएको थियो । हाम्रो भेटघाट पातलियो । पछिल्लो चार महिनादेखि ऊ अनियमित थियो स्कुलमा ।
‘सुन । म उपाध्यक्ष भएँ । अहिले पाँचवटा गाविस हेर्छु । हटिया, हर्ना, आमभञ्ज्याङ, गढी र चुरियामाई ।’
ऊ कहिले क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको जनकपुरको आमसभामा पुग्थ्यो । कहिले काठमाडौंको आमसभामा । त्यस वर्ष उसले कक्षा ९ को वार्षिक परीक्षा दिएन ।
एकपटक साँझको समयमा ऊ हाम्रो घरमा आएको थियो । चुल्हो छेउमा बसेर उसले आफ्नो दुवै हात मोलिरह्यो । निकै हतास देखिन्थ्यो ।
‘अर्को आमसभा विराटनगरमा छ । तर मलाई जान मन छैन ।’ दीपेशले भन्यो । उसको आँखा दन्दनी सल्किरहेको दाउरामा
केन्द्रित थियो ।
‘साम्देन मोक्तान मारिएछ । टाउको एकातिर । जीउ अर्कोतिर ।’
दीपेशले एकै सासमा भन्यो । आमाले हातले आफ्नो मुख छोप्नुभयो । मेरो आङबाट कम्पन छुट्यो । साम्देन मोक्तानको श्यामश्वेत अनुहार सम्झिएँ ।
‘अहिले धुइँपत्ताल मेरो खोजी भइरहेको छ रे । तर म आमा र दिदीलाई छोडेर जान चाहन्नँ ।’ अगुल्टो चलाउँदै दीपेशले भन्यो । आमाले भान्साको ढोका ढप्काउनुभयो ।
‘के तिमी माओवादी भयौ ?’ मैले सासले सोधें ।
‘हो । त्यतिखेर मैले क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको सदस्यता लिएको थिएँ । यो माओवादीकै भ्रातृ संगठन रहेछ । अहिले द्वन्द्व बढेर गएको छ । संगठन छोड्दा माओवादीबाटै कारबाहीमा पर्छु । नछोड्दा पुलिस प्रशासनको कारबाहीमा पर्छु । मेरो लागि दुवैतिर मृत्युको कुवा छ ।’
दीपेशको आँखामा भयको सर्को देखियो । ऊ त्यस रात केही नखाई निस्कियो । हुरी जसरी आयो । गयो ।
तीन महिनापछि ।
म टेस्ट परीक्षामा पास भएँ । एसएलसी तयारी गर्नु थियो । शान्ताराज सरसँग ट्युसन पढ्न जान थालेकी थिएँ हटियामा । त्यस बिहान म साढे ७ बजे घरबाट निस्किएँ । आधा बाटोमा सम्बिका भेटिई । ऊ पनि सँगै परीक्षाको तयारी गर्दै थिई । अघिपछि भन्दा निन्याउरो देखिई ।
‘ओइ । के भयो ?’
ऊ चुपचाप हिँडिरही ।
‘किन चुप छेस् ? के भयो ? भन् न ।’
उसले चुप्पी साधेको देखेर म हैरान भएँ ।
‘हिजो फापरबारीमा शाही सेना र जनमुक्ति सेनाको भिडन्तमा दीपेश मारिएछ । बाले बिहानै रेडियोमा सुन्नुभएको ...।’
सम्बिका वाक्य पूरै नगरी दौडिई बेपत्तासँग । मेरा पैताला जड भए । मानौं, मेरो मुटुको वजन एकाएक बढेको छ । त्यो छाती फुटाएर निस्कूँजस्तो गर्दै छ । त्यसपछि मैले सम्बिकालाई पछ्याइनँ । फरक्कै फर्किएँ घरतिर ।
उत्सव रहेछ जीवन, मनाउन जाने
आँसु पनि मोती बन्छ, खसाउन जाने
कहिलेकाहीँ निर्जीव त्यो, तस्बिर अनि
लियोनार्दोले झैं मोनालिसा बनाउन जाने
फेसबुक स्क्रोल गर्दै थिएँ । कसैले मुक्तक पोस्ट गरेको रहेछ । प्रोफाइल चेक गरें । समुद्रको तस्बिरलाई प्रोफाइल बनाएको रहेछ । नाम सागर । मकवानपुर । मैले ग्यालरी सर्च गरें । खाली थियो ।
‘हेलो, नमस्ते । म चिनीमाया मकवानपुरबाट । कहिलेकाहीं गजल लेख्छु । तपाईंको मुक्तकले मन छोयो ।’
म्यासेन्जरमा पाँच हरफ लेखिपठाएँ ।
‘ममी खाजा के छ ?’ मेरो एघारवर्षे छोरोको आवाजले म तानिएँ । ऊ स्कुलबाट आइपुगेको थियो । मोबाइल बन्द गरेर भान्सामा पसें । साँझको धन्दा सकाएर फेसबुक खोलें । म्यासेन्जरमा दुई–चारवटा नोटिफिकेसन रहेछ । सागरको रिप्लाई देखें । क्लिक गरें ।
‘हेलो । चिनीमाया । मलाई चिन्यौ ? म दीपेश । दीपेश थापा । अहिले मलेसियाबाट ।’
प्रकाशित : माघ २५, २०७६ १२:४६